​भाइरल फोटोको साँचो कहानी, अनाहकमा गाली खुवायो सरकारी गाडीले !
Thursday, 25 Apr, 2019 4:33 PM
१२ बैशाख, काठमाडौं । केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा एउटा फोटो भाइरल भएको छ । फेसबुक र ट्विटरमा हजारौँ पटक एउटा गाडीमा पोज दिइरहेको नवदम्पतिको फोटो सेयर भएको छ । ‘एक जोडीले सरकारी गाडी दुरूपयोग गरेर बिहेको फोटोसुट गरेछन, अब हनिमुन चाहिँ सिंहदरबार गएर मनाउने होलान’, ट्विटरमा चोपेन्द्र भुसाल नामका प्रयोगकर्ताले लेखेका छन् । व्यङ्ग्य र आलोचना मिश्रित यस्ता प्रतिक्रियाहरु अनगिन्ति छन् ।
नदी छेउ जस्तो देखिने गाडीमा बेहुला गाडीभित्र छ भने उसको हात समातेकी बेहुली गाडी बाहिर छिन् । फोटो पोजका कारण भाइरल भएको होइन । गाडीको नम्बर प्लेटले सबैको ध्यान तान्यो । नम्बर प्लेट रातोमा सेतो अर्थात् निजी भएको भए यो अरु जस्तै सामान्य फोटो नै हुने थियो तर थियो सेतोमा रातो अर्थात् सरकारी ।
सामाजिक सञ्जालमा कसैले पनि यो कसको गाडी हो र फोटोमा देखिएका पात्र को हुन् भन्ने बारे लेखेका छैनन् । फोटो सही त हो ? कसैले फोटोसप गरेर गाडीको नम्बरप्लेट परिवर्तन त गरेका हैनन ? यो कहिलेको फोटो हो ?
तर यो सक्कली फोटो भएको पत्ता लागेको छ । बा २ झ १६५० नम्बरको सरकारी स्कर्पियो गाडी मेलम्ची नगरपालिकाको हो । मेयर डम्बर अर्यालले यो गाडी चढ्छन् । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी जितबहादुर कार्कीले यो गाडी नगरप्रमुखको भएको पुष्टि गर्दै गाडीमा मेयरका मान्छे कसैले पनि फोटो नखिचेको दाबी गरेका छन् । फोटोमा देखिएका बेहुला किरण पण्डित हुन् भने बेहुली किरण लामा हुन् । काठमाडौँको एउटा पाँच तारे होटलमा सँगै काम गर्ने क्रममा दुवैबीच बसेको प्रेम वैशाख ७ गते विवाहमा परिणत भएको थियो ।
यो फोटो खिचेका रहेछन् सिनामंगलस्थित स्टार फोटो स्टुडियोका क्यामरा पर्सन अमृत सुर्खेतीले उनीहरुको फोटो सेसन गर्ने क्रममा यो भाइरल भएको फोटोसमेत खिचेका थिए । सुर्खेतीले काठमाडौँको थलीमा विवाह भोजको समयमा आफुले फोटो खिचेको बताएका छन् । विवाहको भोलिपल्ट पार्टीको क्रममा फोटो सेसन गरिएको थियो । वैशाख ८ गते मेलम्चीका मेयर डम्बर अर्याल भोज खान पुगेका थिए । उनै पाहुनाको गाडीमा फोटोग्राफरले फोटो सेसन गरेका हुन । फोटो खिचेपछि फोटोग्राफर सुर्खेतीले नै आफ्नो फोटो स्टुडियोको नामबाट खोलिएको फेसबुक पेजमा पोस्ट गरेका थिए ।
पोस्ट हुने बित्तिकै सरकारी नम्बर प्लेटका कारण धेरैको ध्यान तानियो । उनी भन्छन, ‘पोस्ट गरेको केही समयमा नै गाली आउन थाल्यो ।’
गाली गर्नेमा बेहुला पनि थिए । ‘एक घण्टा पनि राखिनँ होला । बेहुलाले फोन गरेर गाली गर्नुभयो। त्यसपछि मैले हटाएँ ।’ सुर्खेती भन्छन् । ‘यही फोटोको कारण एकदम गाली खाएँ’, फोटोग्राफर सुर्खेतीले भने, ‘गाडी दुरुपयोग भएको होइन । फोटो मात्र खिचेको हो ।’ उनले आफूले यही कारण गाली खाइरहेकाले सही समाचार लेख्न आग्रह गरे ।